Uzowudlela ejele uKhisimusi umfundisi osolwa ngokudlwengula izingane zasebandleni | News24
Cape Town – Uzowudlela ejele uKhisimusi umfundisi okuthiwa utholakale namakhondomu kanye nezithombe zocansi emjondolo okukholakala ukuthi ubedlwengulela aphinde ahlukumezele kuwona ngokocansi izingane zebandla lakhe.
UMfundisi Gihno Perdo Makonono weBlue Skies Love Ministry eKhayelitsha uvele kafuphi eNkantolo kaMantshi eBlue Downs ngoLwesibili ngamacala amabili okudlwengula kanye namahlanu okunukubeza ngokocansi amantombazane ayisikhombisa aneminyaka ephakathi kweyisikhombisa kuya kwengu-14 ubudala.
Lolu daba luhlehliselwe uJanuwari-22 lapho ezofaka khona isicelo sebheyili.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe ujele ngokutholakala nezidakamizwa
Amaphoyisa abopha uMakonono, 47, ngoNovemba ngemuva kwezinsolo zokuthi wabanjwa oqotsheni nesisulu esineminyaka engu-12 ubudala emjondolo ayewuqashile eKalkfontein.
Amaphoyisa kuthiwa athola emjondolo amakhondomu, i-silicone, u-vaseline kanye nama-DVD ezithombe zocansi.
NgoLwesibili, amanye amantombazane, imindeni yawo kanye namalungu omphakathi babuthane ngaphandle kwenkantolo bebhikishela ukuba umfundisi anganikezwa ibheyili.